"Rockin'-the-World" Music News!
Music News (525)
K- Pop အဖွဲ့တွေကြားမှာ ထိပ်တန်းဖြစ်လာတဲ့ BLACKPINK ရဲ့ Ddu-Du Ddu- Du
နိုင်ငံတကာမှာ Top ဖြစ်နေတဲ့ Ariana Grande ရဲ့7Rings
လီဆိုရာ ရဲ့ သီချင်းအသစ် Song Request
နှစ်သစ်မှာ အခွေသစ်ထွက်လာကြတဲ့ Backstreet Boys
အသက် ၂၆ နှစ် ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ 2NE1 ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး Minzy
SM, JYP နဲ့ Big Hit Entertainment တို့ပူးပေါင်းပြီး Music Service တစ်ခုဖန်တီးမည်
On January 31, 2018 By Atsuko
K-Pop လောကရဲ့ နာမည်ကြီး Talent Agency တွေဖြစ်ကြတဲ့ SM Entertainment, JYP Entertainment နဲ့ Big Hit Entertainment တို့က သီချင်းတွေကိုဖြန့်ချိမယ့် service platform တစ်ခုကို ပူးပေါင်းဖန်တီးကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့မှာ အဲဒီ agency သုံးခုနဲ့ SK Telecom တို့ဟာ အဆိုပါလုပ်ငန်းအတွက် သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့စတင်မယ့်အဆိုပါ […]
Music NewsIndustryK-PopLeaveacomment
TWICE ကျေးဇူးနဲ့ YG Entertainment ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျော်တက်သွားခဲ့တဲ့ JYP
On January 19, 2018 January 22, 2018 By Atsuko
ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ဂဏန်းတွေအရဆိုရင် JYP Entertainment ဟာ YG Entertainment ရဲ့ တန်ဖိုး (Market Cap) ကိုကျော်တက်ပြီး ကိုရီယား Entertainment ကုမ္ပဏီကြီးသုံးခု (SM/JYP/YG) တို့ထဲမှာ ဒုတိယနေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၁၇ စျေးကွက်ပိတ်ချိန်မှာ JYP Entertainment ရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးဟာ ကိုရီးယားဝမ် ၅၆၀.၉၁ ဘီလျံ ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၂၅.၄ သန်း) ရှိနေခဲ့ပြီး YG Entertainment […]
မူပိုင်ခွင့်ပြဿနာကြောင့် ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံ လျှော်ကြေးတောင်းခံရတဲ့ Spotify
On January 3, 2018 January 3, 2018 By Atsuko
Spotify ဟာ လက်ရှိအချိန်အထိ သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ အမှုတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က Wixen Music Publishing က သူပိုင်ဆိုင်တဲ့သီချင်းတွေကို Spotify က ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ပြီး ရယူသုံးစွဲခဲ့လို့ နစ်နာကြေး ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံရရှိလိုကြောင်း တရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Wixen Music Publishing ဖော်ပြချက်အရဆိုရင် Spotify ဟာ Tom Patty, The Doors နဲ့ Neil Young စတဲ့အဆိုတော်တွေရဲ့သီချင်းတွေအပါအဝင် […]
Music NewsIndustryLeaveacomment
၂၀၁၇ တစ်နှစ်တာအတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရေပန်းအစားဆုံး အဆိုတော် ၁၀ ဦး
On December 22, 2017 January 22, 2018 By Atsuko
Research ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gallup Korea က ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် Korean Music Industry အတွင်းက နာမည်အကြီးဆုံး celebrity ၁၀ ဦးကိုသိရှိဖို့အတွက် အသက် ၁၃ ကနေ ၅၉ နှစ်ကြားက ကိုရီးယားနိုင်ငံသား ၄၂၀၀ ကျော်ခန့်ကိုစစ်တမ်းကောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါရဲ့ရလဒ်ကတော့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ celebrity တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရင်ထဲက ထိပ်ဆုံး ၁၀ ယောက်နဲ့ကိုက်မကိုက် အဖြေညှိကြည့်လိုက်ပါလား။ 10. Lee […]
FeaturesIndustryK-PopPeopleLeaveacomment
K- Pop အဖွဲ့တွေကြားမှာ ထိပ်တန်းဖြစ်လာတဲ့ BLACKPINK ရဲ့ Ddu-Du Ddu- Du January 30, 2019
နိုင်ငံတကာမှာ Top ဖြစ်နေတဲ့ Ariana Grande ရဲ့7Rings January 30, 2019
လီဆိုရာ ရဲ့ သီချင်းအသစ် Song Request January 28, 2019
Audio Music Award Band BBMAs Billboard Music boy band BTS cardibCelebrity Collaboration Country Music Dating News DJ EDM ed sheeran electro pop girl band Gossip Hip-Hop / Rap Industry Instagram J-Pop justin K-Pop korea kpop Kpop Idol Latin music List Live Metal Music Video Myanmar New Release People playlist Pop R&B / Soul Rock rock band Soundtrack taylor tour news Variety YouTube
© 2018 Digital Laboratory Myanmar. All Rights Reserved. | Theme: OnlineMag by eVisionThemes